सोभियत संघका अन्तिम नागरिक 'अन्तरिक्षयात्री' जसलाई पृथ्वीमा फर्किन दिइएन! - Dainik Online Dainik Online
सोभियत संघका अन्तिम नागरिक ‘अन्तरिक्षयात्री’ जसलाई पृथ्वीमा फर्किन दिइएन!
प्रकाशित मिति : १९ पुस २०७८, सोमबार २ : ३१
अन्तरिक्षयात्री सर्गेइ क्रिकालेभ तत्कालिन सोभियत संघको एमआईआर स्पेस स्टेसनबाट पुरा विश्व देख्न सक्थे।
तर त्यो उचाईबाट उनले त्यो राजनीतिक संघर्ष देख्न सक्दैनथे जुन आगोमा उनको देश जलिरहेको थियो।
सन् १९९१ मे १८ का दिन अन्तरिक्षयात्री क्रिकालेभ सोयूज रकेटमा बसेर पाँच महिने लामो मिसनको लागि अन्तरिक्षमा रहेको एमआईआर स्पेस स्टेसन पुगेका थिए।
उनीसँगै सोभियत संघका एक अर्का वैज्ञानिक अनातोली आर्केबास्र्की र बेलायती वैज्ञानिक हेलेन सरमन पनि त्यहाँ पुगेका थिए।
उनीहरु सवार रकेट काजकिस्तानको बैकानुर अन्तरिक्ष केन्द्रबाट लन्च भएको थियो। त्यो सोही केन्द्र थियो जसको सहयोगमा सोभियत संघले अमेरिकालाई अन्तरिक्ष प्रतिस्पर्धामा पछाडि छाड्दै पृथ्वीको कक्षमा पहिलो भूउपग्रह खडा गरेको थियो।
त्यतिमात्र नभएर सोही अन्तरिक्षकेन्द्रबाट सोभियत संघले ‘लाइका’ नामक कुकुरलाई अन्तरिक्षमा पठाएको थियो यस्तै सन् १९६१ मा पहिलोपटक युरी गागरिनलाई अन्तरिक्षमा पठाएको थियो।
१९९० को दशकसम्ममा मिर अन्तरिक्ष केन्द्र एमआईआर अन्तरिक्ष अभियानको क्षेत्रमा सोभियत संघको शक्तिको प्रतिक बनिसकेको थियो।
सोही क्रममा क्रिकालेभ पनि नियमित मिसन अन्तर्गत अन्तरिक्षमा गएका थिए। उनले अन्तरिक्षकेन्द्रको पाटपूर्जाहरु ठिक गर्नुपर्ने थियो। अन्तरिक्षमा सबै ठिक ढंगबाट काम भइरहँदा सोभियत संघ भने पतनको दिशामा थियो।
क्रिकालेभ अन्तरिक्षमा हुँदा केही महिनाभित्रै विशाल र शक्तिशाली सोभियत संघ विघटन भयो। जसका कारण सहज मिसनमा अन्तरिक्ष केन्द्रमा पुगेका क्रिकालेभ केही महिनासम्म अन्तरिक्षमै बसिरहन बाध्य भए।
उनले पहिले तोकिएको समयभन्दा दोब्बर समय अन्तरिक्षमा बस्नुपर्यो।
सर्गेइ क्रिकालेभ दश महिनाभन्दा बढी समय अन्तरिक्षमा बस्न बाध्य भए। पछि पृथ्वीमा पाइला टेक्दा उनको देशको नाम विश्व नक्साबाट हटिसकेको थियो।
यही अन्तरिक्ष मिसनका कारण पनि उनलाई सोभियत संघको अन्तिम नागरिक पनि भन्ने गरिएको छ।
सन् १९९० देखि १९९१ को समयमा सबै गणराज्यले आफू स्वतन्त्र भएको घोषणा गरे जो मिलेर सोभियत संघ बनेका थिए।
त्यसबेला सोभियत संघका राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोभ थिए।
उनको चर्चित अभियान ‘पेरेस्त्रोइका’का कारण देश आधुनिकिकरण र पुँजीवादतर्फ उन्मुख भइरहेको थियो। उनले कयौं कम्पनीको आर्थिक शक्तिलाई विकेन्द्रिकरण गरे साथै उनले निजी व्यवसाय गठनको बाटो खोले।
तर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यस कार्यको धेरै विरोध भयो। सन् १९९१ को १९ देखि २१ तारिखबीच कम्युनिस्ट पार्टीको सबैभन्दा मजबुत क्षेत्रले गोर्बाचोभविरुद्ध सत्ता हत्याउने कोशिश गरे।
यो कूको प्रयास विफल त भयो तर यसले सोभियत संघलाई धेरै नोक्सान पुग्यो।
जब गोर्बाचोभ आफ्नो देशको नियन्त्रण गुमाइरहेका थिए त्यसबेला अन्तरिक्षयात्री क्रिकालेभ अन्तरिक्षमा थिए।
सोभियत संघ गहिरो राजनीतिक र आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेकाले क्रिकालेभलाई अर्को आदेश नआइन्जेलसम्म अन्तरिक्षमै बस्न र पृथ्वीमा नआउन भनियो।
सन् १९९३ मा बीबीसँगको अन्तर्वार्तामा क्रिकालेभले भनेका थिए,‘हाम्रो लागि सो आदेश निकै अप्रत्याशित थियो। जे भइरहेको थियो त्यो हामीले बुझिरहेका थिएनौं। उनीहरुले हामीलाई थौरै जानकारी दिएका थिए त्यसैबाट हामीले सबैकुरा सम्झिने कोशिश गर्यौं।’
क्रिकालेभ सन् १९९२ मार्च २५ का दिन पृथ्वी फर्किएका थिए। त्यसबेला सोभियत संघ रुस भइसकेको थियो। ३१२ दिन अन्तरिक्षमा बसेका उनले ५ हजारपटक पृथ्वीको चक्कर लगाए।
विभिन्न गणराज्यसँग विवाद भएपछि अन्तरिक्षयात्रीको अभाव र नयाँ अन्तरिक्षयात्रीसँग अनुभवको अभाव भएकाले क्रिकालेभ अन्तरिक्षमै बस्नुपरेको थियो। उनी पृथ्वीमा आउन त सक्थे तर अन्तरिक्ष स्टेसन नै खाली गरेर आउन मिल्दैन थियो।
उनले पृथ्वीमा फर्किएपछि आफूलाई पृथ्वीमा नफर्किन भनिएको कुरा सम्झिरहन्छन्। हाल ६३ वर्षका उनी रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा बस्दछन्। बीबीसीहिन्दीको सहयोगमा